गृहपृष्ठ » जीवनशैली » यस्तो छ संसारका सबैभन्दा धनी एलन मस्कको दैनिकी, जान्नुहोस् दिनभरी के–के गर्छन् ?
काठमाडौ । एलन मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन । उनी नयाँ–नयाँ किसिमका सोचका लागि समेत परिचित छन् ।
यस्ता सबै कार्यका लागि उनलाई व्यवस्थित कार्ययोजना र जीवनशैलीको आवश्यकता पर्दछ । कुनै पनि सफल व्यक्तिका लागि दैनिक कार्यतालिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यतिसम्म कि कतिपय समय त उनी रातिको समयमा काम गर्ने स्थानमै सुत्ने गर्दथे । उनी उठ्दा बिहान करिब ७ बजेको हुन्छ । मस्कको भनाइमा उनी छ देखि साढे छ घण्टा सुत्ने गर्छन् ।
जब उनी कम मात्रामा सुत्ने गर्छन्, तब त्यसको असर आफ्नो काममा पर्ने ठान्छन् । बिहान उठेपछि उनी नुहाइधुवाई गरेर एक कप कफीमा रमाउँछन् । उनी प्रायजसो हतारोमा हुने गर्छन् । त्यसैले त उनको दिउँसोको खाजा छुटिरहेको हुन्छ ।
एलन मस्क मल्टीटास्कर हुन्, अर्थात अनेक किसिमका काम एकैपटक गर्ने खुबी राख्छन् । तर पनि उनी धेरैजसो फोन वा ईमेलमा व्यस्त हुँदैनन् । उनको बुझाइमा व्यस्त रहने गरेका कारण उनी आफ्नो न्युट्रिसनमा समेत ध्यान दिन पाउँदैनन् ।
जसमा एलन मस्कले हप्तामा १२० घण्टासम्म काम गर्ने गरेको बताइएको थियो । बाबु भइसकेपछि उनले आफ्ना बच्चासँग धेरै समय बिताउन सुरु गरे । उनले आफ्ना बच्चाको नाम ‘एक्स एस ए(१२’ ९ह् ब्भ् ब्(ज्ञद्द० राखेका छन् ।
उनी कामबाट राति करिब १० बजे घर फर्किन्छन् । त्यसपछि केही समय पढ्छन् र एनिमेटेड मुभी हेर्छन् । करिब राति १ बजेमात्र उनी सुत्ने गर्छन् । यस्तो छ संसारका सबैभन्दा धनी एलन मस्कको दैनिकी, जान्नुहोस् दिनभरी के–के गर्छन् ?
काठमाडौ । एलन मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन । उनी नयाँ–नयाँ किसिमका सोचका लागि समेत परिचित छन् । यस्ता सबै कार्यका लागि उनलाई व्यवस्थित कार्ययोजना र जीवनशैलीको आवश्यकता पर्दछ । कुनै पनि सफल व्यक्तिका लागि दैनिक कार्यतालिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अविवाहित या विवाहित कसैपनि भुलेरपनि टिभी, कम्प्युटर यसरी नराख्नु, नत्र हुनेछ ठूलो नोक्सान
यस्तो हस्तरेखा भएका महिला होस् या पुरुष पक्का २ विवाह हुन्छ, यस्ताको विवाह हुनै मुस्किल